लक्ष्मी गिरी सानो छँदा
बाँदर मेरो साथी
लक्ष्मी गिरी कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली, भोजपुरी, मैथली र नेपाल भाषा (नेवार समुदायको भाषा) चलचित्रहरूमा चरित्र अभिनेत्री हुने पहिलो महिलाकलाकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म २०११ माघ ६ मा काठमाडौंको पशुपति क्षेत्र, देवपत्तनमा भएको हो । उहाँका पिताको नाम मुक्तिनाथ पौडेल र माताको नाम उजेली अधिकारी हो । उहाँ एक्लो सन्तान हो । लक्ष्मीले एक सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ । उहाँलाई ३ सय ७२ वटा टेलिश्रृंखलामा देखिसकिएको छ । मदनकृष्ण र हरिवंशको नाटक ‘विज्ञापन’ को कूल ३ सय ८९ प्रदर्शनमा उहाँले २ सय ८९ पटक अभिनय गर्नुभएको छ । यसबाहेक उहाँले अभिनय गरेका नाटकको संख्या धेरै छ । ‘विज्ञापन’ नाटककै प्रदर्शन र अन्य कार्यक्रमसहित उहाँले अमेरिकाका ३५ राज्य, बेलायतका ३ राज्य, हङकङका धेरै भाग, भारत आदि देश देख्ने मौका पाउनुभएको छ । कलाकारिताबाहेक उहाँले २०२८ देखि २०५१ सालसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकको जागिरे भएर बिताउनुभयो । बैंकको सहायक पदमा कार्यत हुँदा २०३८ सालमा बैंकको रजतजयन्तीका अवसरमा प्रदर्शित नाटकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेवापत दुई ग्रेड वृद्धि भयो । २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजनको औपचारिक प्रसारण सुरु भएयता निरन्तर नेटीभीमा अभिनय गर्ने महिलाकलाकार उहाँमात्रै हुनुहुन्छ । उहाँको पहिलो टेलिश्रृंखला ‘अप्रिल फर्स्ट’ हो । उहाँ साहित्यमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ । यसपटक गिरी सानो छँदाका केही सम्झना :
लीलाराम न्यौपाने सानो छँदा
मृत्युको मुखमा नुन
लीलाराम न्यौपाने समाज सेवामा संलग्न उद्योगपति हुनुहुन्छ । उहाँको जीवनीमा आधारित पुस्तक हालै सार्वजनिक भएको छ । लीलाराम-कुन्तीदेवी न्यौपाने प्रतिष्ठानले न्यौपानेले सामाजिक सेवामा योगदान पुर्‍याएवापत उहाँको जीवनीमा आधारित ‘लीलाराम न्यौपानेको जीवनी र व्यक्तित्व’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । न्यौपाने-परिवारले अम्बे सिमेन्ट, अम्बे स्टिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, यमयम चाउचाउ जस्ता करिब डेढ दर्जन उद्योगमा लगानी गरेको छ । लीलारामले व्यक्तिगत रुपमा धेरै संघसंस्थालाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँको जन्म १९८५ साल चैत २९ गते गुल्मी जिल्लाको हुँदी झेर्दीथुम्कामा भएको हो । उहाँका पिताको नाम विश्वराम र माताको नाम गायत्रीदेवी हो । उहाँहरू तीन दाजुभाई र एक बहिनी जन्मनुभएको हो । लीलाराम कान्छो छोरा हुनुहुन्छ । बहिनीको सानैमा निधन भयो । यसपटक न्यौपाने सानो छँदाका केही सम्झना :
वसुन्धरा भुषाल सानो छँदा
वसुन्धरा भुषाल चलचित्रकी अभिनेत्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई हाँस्यसाम्राज्ञी उपाधि दिइएको छ । वसुन्धराको जन्म २००७ फागुन २६ मा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा भएको हो । पिता सानुमान सिंह र माता बुद्धकुमारी सिंहका ६ छोरी र एक छोरा जन्मे । उहाँ साहिली छोरी हुनुहुन्छ । उहाँले आरआर क्याम्पसमा आइएसम्म पढ्नुभएको छ । उहाँले १ सय ३५ भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ । उहाँले रंगमञ्चबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको हो । उहाँको पहिलो चलचित्र ‘आमा’ हो । ‘आमा’ मा उहाँ ‘ए रात्तै’ थेगो भन्ने बाल-कलाकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँ चलचित्रकी पहिलो हाँस्य अभिनेत्री हो । भ्वाइलिन बजाउने पनि नेपालकै पहिलो महिला हुनुहुन्छ । चेतनारायण-वसुन्धरा पुरस्कार गुठीको अध्यक्ष, चलचित्र कलाकार संघ आदि संस्थामा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ । भुषालले भारत, तत्कालिन सोभियत संघ, उत्तर कोरिया, चीन, बर्मा, हङकङ, थाइल्यान्ड, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, जापान, क्यानडा जस्ता देशको यात्रा गर्नुभएको छ । उहाँले धेरै सम्मान पाउनुभएको छ । पछिल्लोपटक अमेरिकाको न्यूयोर्क कलामञ्चको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र नेप्लीज वुमन वेल्फेयर अर्गनाइजेसनबाट सम्मान पाउनुभयो । यसपटक वसुन्धरा सानो छँदाका केही सम्झना :
सुशिला चापागाईं सानो छँदा
ठेकीको दही चट्
सुशिला चापागाईं विराटनगरकी समाजसेवी हुनुहुन्छ । उहाँले ‘नारी विकास संघ’ नामक संस्थामार्फत महिलाको चौतर्फी विकास गर्दै आउनुभएको छ । उक्त संघको स्थापना २०३७ कात्तिकमा भएको हो । यसका अहिले पाँच क्षेत्रीय कार्यालय : हेटौडा, धरान, इलाम, विराटनगर र बेलबारीमा छन् । २३ शाखा छन् । सुशिलाको जन्म १९९२ साल मंसिर २ गते भोजपुरको र्‍याङ, सुन्तलाबारीमा भएको हो । उहाँका पिताको नाम विष्णुप्रसाद अधिकारी र माताको नाम अयोध्यादेवी अधिकारी हो । उहाँहरू ३-३ दाजुभाइ र दिदीबहिनी जन्मनुभएको हो । सुशिला माहिली छोरी हुनुहुन्छ । उहाँको विवाह चापागाईं परिवारमा भयो । ११ वर्षमै बिहे भएपछि उहाँ दिङ्ला जानुभयो । २०१८ सालमा मधेश आउनुभयो । केही समय मोरङको देहातमा बसेपछि उहाँ विराटनगर आउनुभयो । उहाँ धेरै संस्थाको सदस्य हुनुभयो । अहिले आफ्नै संस्थामा मात्र बढी समय दिनुहुन्छ । सुशिलाले थाइल्यान्ड, श्रीलंका, भारतजस्ता केही देश भ्रमण गर्नुभएको छ । समाजसेवा गरेकाले उहाँलाई धेरै पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको छ । यसपटक सुशिला सानो छँदाका केही सम्झना :
डी. बी. थापा सानो छँदा
डी.बी. (डम्बरबहादुर) थापा राजधानीको न्यूरोडस्थित फोटो कन्सर्नका संस्थापक हुनुहुन्छ । उहाँले फोटोग्राफी र चलचित्र निर्माणमा धेरै समय बिताउनुभएको छ । उहाँको जन्म १९९१ फागुनमा धादिङको मुलपानी गाउँ विकास समिति २ मुर्चुकमा भएको हो । पिता नरबहादुर र माता कृष्णकुमारीका एक छोरी र दुई छोरी जन्मिए । ती दुई छोरी डीबीका बहिनी हुनुहुन्छ । सानैमा उहाँ भारत जानुभयो । फोटोग्राफी र चलचित्रका क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । त्यो अनुभवलाई देश फर्केर काममा लगाउनुभयो । यस्तै काम र तालिमका लागि थापाले फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, रुस, जापान जस्ता एसिया र युरोपका सबैजसो देश भ्रमण गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी, शान्ति फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल कलर ल्याब संघ, फोटोग्राफिक एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल फोटोग्राफिक सोसाइटी, वेस्टर्न इन्डिया सिनेमटोग्राफी एसोसिएसन जस्ता संस्थामा रहेर काम गर्नुभएको छ । ‘माया-प्रीति’, ‘जीवन-ज्योति’ जस्ता चलचित्र बनाउनुभएको छ । विभिन्न सम्मान पाएका थापा सानो छँदाका केही सम्झना :